२५ मङ्सिर २०७५ | December 12, 2018
नियमित शोमा ‘सोनाम ग्याल्मो’
Monday,2Jul, 2018 11:18 AM
काठमाडौं । जंगबहादुरलाई जारले काटेको मिथमा आधारित नाटक ‘सोनाम ग्याल्मो’को नियमित मञ्चन भइरहेको छ । राजधानी बत्तिस पुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा नाटकको नियमित मंचनमा आएको हो ।
दुईवर्ष लामो अनुसन्धान र अध्ययनपछि संचारकर्मी एवं नाटककार फूलमान वलले लेखेको नाटक ‘सोनाम ग्याल्मो’ले जंगबहादुरलाई जारले काटेको तामाङ मिथलाई अहिलेको जीवनस“ग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । सोनाम लामा मोक्तानको निर्देशन रहेको नाटक तामाङ सुमदायको विवाहबाट शुरु हुन्छ । विवाहमा बेहुला र बेहुली राखेर चारदाम (वैवाहिक जीवनको कसम खुवाउने विधि) गर्दै गर्दा नाटक फ्लासब्याकमा जान्छ ।
त्यसपछि सर्लाही पत्थरघट्टा आसपासको पुरानो तामाङ समाज र जीवनको उत्तरार्थमा त्यही ठाउ“मा शिकार खेल्न गएका जंगबहादुरबिचको संघर्षले नाटकलाई गति प्रदान गर्छ । मुख्य पात्र छन् भर्खरै विवाह भएको सोनाम र ग्याल्मो । ग्याल्मोलाई जंगबहादुरले मन पराएर हरण गरेपछिको पीडादायी सन्दर्भ र उनैले बनाएको ‘जार काट्ने कानुन’को टेकेर आइपुग्ने सोनामबिचको उतार–चढाव नाटकमा लोभलाग्दो छ ।
जंगबहादुर कसरी मरे ? त्यो भने रहस्यमै छाडिएको छ । तामाङ संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई माला जस्तै उनिएको नाटकमा तामाङ फिल्मकी चर्चित नायिका चा“दनी लामा, सेलो गायक एवं संगीतकारद्धय फूलकुमार बमजन र सुसन लामाको पनि अभिनय छ । मुख्य पात्र सोनाममा निर्देशक स्वयंले खेलेका छन् भने ग्याल्मोको भुमिकामा शान्ति वाइबा छिन् । यसबाहेक निकिता वाइबा, निशा पाख्रिन, मात्रिका घिमिरे, मनोज तामाङ, सन्तोष तामाङ (बोन्बो), सन्जीव राई, देविन चौधरी, विजय टुबा, सुनिल तामाङ, साजन लामा लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
नाटकमा तामाङ समुदायको ताम्बा संस्कृतिलाई पनि सघन रुपमा देखाइएको लेखक वलले बताए । उनका अनुसार जंगबहादुरलाई जारले काटेको थुप्रै कथाहरु छन् । यही विषयमा संस्कृतिविद एवं अन्वेषक रविन्द्र ग्याबा तामाङले पुस्तक नै लेखेका छन् । सेलो थिएटरको प्रस्तुति रहेको नाटक मंगलबार बाहेक हरेक दिन साँझ ५ बजे नियमित मंचन भइरहेको छ । शनिबार दुई शो हुने निर्देशक सोनाम मोक्तानले जनाए ।
​एउटा सफल गीतको कथा : यसरी बन्यो गीत
​एनसेल काण्डमा तानिदै राष्ट्र बैंक
​भारतको बिधानसभा निर्वाचनमा मोदी र भाजपालाई धक्का
​सडक विभागमा सरुवाको तयारी
​प्रधानन्यायधीश सिफारिसको निर्णय आज हुँदै, सिफारिसको सूचिमा विवादास्पद न्यायधीश
​सशस्त्र प्रहरीलाई एयरपोर्ट ?
तेस्रो बिहे गरेर थुनामा परेपछि एकै दिन तीन पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद !
जुम्ला जान १५० विशेषज्ञ चिकित्सकको निवेदन